လားရှိုမြို့ အနီး ရှန်ခိုင် ကျေးရွာ မှ ထူးဆန်း စွာ Hindu သီဝ နှင့်သားတော် ဂနေ့ရှ် ဆင်းတု ပုံစံ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လာနေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » လားရှိုမြို့ အနီး ရှန်ခိုင် ကျေးရွာ မှ ထူးဆန်း စွာ Hindu သီဝ နှင့်သားတော် ဂနေ့ရှ် ဆင်းတု ပုံစံ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လာနေ
လားရှိုမြို့ အနီး ရှန်ခိုင် ကျေးရွာ မှ ထူးဆန်း စွာ Hindu သီဝ နှင့်သားတော် ဂနေ့ရှ် ဆင်းတု ပုံစံ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လာနေ
Posted by Bayote on May 26, 2010 in Myanma News, News | 12 comments
လားရှိုမြို့ အနီး ရှန်ခိုင် ကျေးရွာ မှ ထူးဆန်း စွာ Hindu သီဝ နှင့်သားတော် ဂနေ့ရှ် ဆင်းတု ပုံစံ သဘာဝ အလျှောက် ပေါ်ထွက်နေပုံပါ။ နှစ်စဉ် ပွဲတော်ကြီး ကျင်းပကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။ ဆုတောင်းမှု ပြည့်သောကြောင့် နှစ်စဉ် ပွဲတော်ရက်များတွင် လူအများ စည်ကားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Hindu လူမျိုးများစွာ လာရောက်ဖူးမျှော်ကြကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ တစ်နှစ်တစ်ခါ တဖြည်းဖြည်း ပေါ်ထွက်လာကြောင်း ကခု လက်ချောင်းပေးများမှာ ထင်ရှားလာပြီး ဘုရားကျောင်းအတွင်းရှိ ဂနေရှ ဆင်းတုမှာ ပိုကာ ပေါ်လွှင်လာကြောင်းသိရပါတယ်။
နှစ်စဉ် သက်ဆိုင်ရာ အစိုးရမှလည်း ပွဲတော်အတွက် အထူးရထားစီစဉ်လေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လားရှိုးမြို. အထိပါ။ လားရှိုးမှ ရှန်ခိုင် ကျေးရွာ အထိ ကားနဲ့ ပြန်သွားရပါတယ်။ သဘာဝ ရေတံခွန်လေးနဲ့ ဘုရားကျောင်းအတွင်း ဖြတ်စီးတဲ့ စမ်းချောင်းလေးရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သီဝဘုရား နှင့်သားတော် ဂနေရှ ဆင်းတုပုံပါ။ သဘာဝ ကျောက်တောင်နှင့် ယှဉ်တွဲ ကြည့်ရှု ပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ဂနေရှ ဘုရားသခင်မှာ မကြာ ခင်နှစ်များမှ ကမ္ဘာ အလွှမ်း နှာမောင်းနှင့် ဆင်းတုများမှ နွားနို့ နီးစပ်စွာထားပါက စက္ကန့် ပိုင်းအတွင် နွားနို့ ပျောက်သွားသော ဘုရားသခင်ပါ။ နှစ်ကြိမ်တိုင် ရာစုနှစ်အတွင်း ဖြစ်ပေါ် ခဲ့ကြောင်းပါ။
သူ့ဘာသာသူ ဘာ ပေါ်ပေါ်ပေါ့ စောက်ရေးလုပ်လို့ ။
ဘာများလဲလို့ ။ မမြင်ရရင်တောင်ကောင်းသေးတယ် ။ ခါးခါးသီးသီးကို မုန်းတယ် ။
etone so ta` kaung nar lal bu lar cow ya` lu sate ma shi ta` kaung ma yone kyi yin nay tu myar tawe ko ma saw kyar ya bu ma tar ya`
min ko saw saw ka lu lo htin tar khu top bar lal sinsar tar kyi topnaw maw pyaw top bu
အီးတုံး။ သီဝဘုရားနဲ.သားတော်နော်။ တစ်ခုခု တွေ.ကြုံရယင်တော့ အဲဒီဘုရားသာသွားလိုက်တော့။
India မှာ အကြည်ညိုဆုံးတွေမှာပါတယ်။ မကိုးကွယ်ရင်ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မစော်ကားသင့်ဘူးထင်ပါတယ်။
doe nal ma sain ..di lo pyaw nay tar tawy ko….ta yaught nal ta yaught pyaw nay tar ko pyaw tar….
etone mhar tal..
thu myar bar tar ko ma saw kar tint buuuu
I pyaw tar hote tal hote
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ယုံကြည်ရာဘဲ
ကိုယ့်ကို လာပုတ်ခတ်တော့ မခံနဲ့ပေါ့
ဘာသာတိုင်း ဘာသာတိုင်းမှာ သူ့ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုနဲ့သူရှိကြပါတယ်ဗျာ…
မယုံကြည်ရင်နေပါ အဲလိုတော့ မပုတ်ခတ်ကြပါနဲ့ ကျွန်တော်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်ပါ
ဒါတွေကို မယုံကြည်ပါဘူး ဟုတ်တယ်လေ.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေမှာ ဘုရားမှလွဲအခြားမရှိလို့ ယုံကြည်ထားကြတာပဲ
သူတို့ဘာသာတွေမှာလည်း သူတို့ ယုံကြည်ရာ ကိုးကွယ်ရာတော့ ရှိကြတာပေါ့ဗျာ… ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကိုးကွယ်ကြတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ…
ဘာသာတရားက အရေးပါတယ် .. လူဆိုတာကြီးဖြစ်ထွန်းလာဖို့ .. ဒါကြောင့် အနော်က တော့ ဘာသာတိုင်းကို ယုံကြည်တယ် .. ဘာသာတရားကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မိန်းလေးတွေကိုလည်း ချစ်တယ် .. ဟီး ..
ဟိုက် ခုမှမြင်တယ်ဗျာ။မတွေ့ မိဘူး။ထူးဆန်းလိုက်တာနော်။ခုလောက်ဆိုရင်